China PP Meltblown Production Nonwoven Fabric Making Machine Production Line mpanamboatra sy mpamatsy | Meiben
Dingana famokarana lamba tsy tenona
Famaritana tsipika famokarana tsy tenona
Firafitry ny rafitra famokarana
Ny tsipika famokarana lamba tsy tenona spunbond dia fitaovana fanodinana mekanika tena sarotra nefa manan-tsaina. Etsy ambany, ny mpampanonta dia hampiseho aminao ireo singa lehibe roa amin'ny tsipika famokarana tsy vita amin'ny spunbond amin'ny antsipiriany.
Ireo singa roa lehibe etsy ambony dia mamorona tsipika famokarana lamba tsy vita amina spunbond, izay manome antoka matanjaka sy azo antoka ho an'ny famokarana lamba tsy voatenona spunbonded. Miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny teknolojia famokarana, maro ny tsipika famokarana tsy tenona efa manomboka mampihena ny vidiny ary lasa malaza, ary mpanamboatra maro no nanomboka nampiditra azy ireo. Ny fitaovana rehetra natolotry ny mpanamboatra tsipika fanodinam-bidy tsy misy tenona dia misy atiny teknika avo lenta, vidiny siantifika ary kalitao tena tsara, izay hahazoana antoka fa ho afa-po amin'ny fampiasanao ianao. Raha liana amin'ny fitaovantsika ianao dia aza misalasala mitsidika ny orinasa.
Teo aloha: 1600mm Milina-mitsoka lamba manao milina PP Nonwoven Production Production-dalana,
Manaraka: Tsipika famokarana tsy vita tenona Spunmelt, tsipika famokarana tsy vita amin'ny tenona
SMS PP Nalefaka-notsofina Nonwoven Fabric Production Li ...
1600mm Milina-tsofina lamba fanaovana milina PP Nonw ...